[64% OFF] Lazada.com.ph Kuubannada & Koodhadhka qiimo dhimista
Lazada.com.ph Xeerarka kuubanka
BDO Visa Credit Cardholders Get ₱300 Off ₱3000 Spend Lazada waxay bixisaa alaabooyin kala duwan qaybo kala duwan. Laga soo bilaabo qalabka elektiroonigga ah sida taleefannada casriga ah iyo faaruqyada ilaa isbeddellada moodada ugu dambeeyay, waxaad ka heli kartaa dhammaan madalkan. Ku biir warsideheena kuubannada qiimo dhimista Lazada Filibiin gacanta, dalabyada, foojarrada, heshiisyada, xayeysiisyada, iyo iibkooda ugu kulul.
Hel Php100 marka aad GCash u isticmaasho Habka lacag bixinta Lazada Filibiin waxay leedahay iib cusub oo toosh ah maalin kasta, laakiin heshiisyadan waxay soconayaan oo kaliya ilaa alaabada la iibinayo la iibiyo. Samee koonto macmiil Lazada Philippines si aad u keydiso 30-50% kiisaska taleefanka iyo kiniiniyada gacanta. Ka fiiri bogga hore ee mareegaha Lazada Philippines heshiisyo waaweyn oo ku saabsan xirmooyinka safarka iyo alaabta guriga.
₱ 50 Dooro Dawaynta Iibka Gcash Lazada sidoo kale waxay leedahay xayeysiisyo u gaar ah app had iyo jeer sidoo kale! Baro Jadwalka Iibka Lazada Filibiin 2021. Hubi inaad kaydiso bogga rasiidhka Lazada Rappler ee ku yaal bogaggaaga oo aad la socotid foojarka ugu dambeeyay iyo xayeysiiska kaarka deynta sida boonooyinka BDO inta lagu gudajiray 11.11, 12.12, iyo iibinta Kirismaska ​​& Sannadka Cusub.
20% Ka -goynta DUKAANKA IIBINTA Xeerka Xayeysiinta Lazada & Xeerka Foojarka Ogosto 2021. Ku dukaamee badeecadaha kala duwan ee laga heli karo qiimayaal wax-ku-ool ah kaliya Lazada Philippines. Iyada oo la adeegsanayo alaabooyin kala duwan, waxaad ku heli doontaa inaad ka hesho dhammaan waxyaabaha daruuriga ah ama alaabada firaaqada hal meel, ka hel dalabyada dhimista la xiriira ee ku jira websaydhkeenna ku qoran qaabka koodhadhka xayeysiinta Lazada, iyo inbadan.
Fursad u hel inaad ku guuleysato Condo markaad isticmaaleyso Habka Lacag bixinta GCash Kuubannada Lazada iyo foojarrada waa hab fiican oo lagu keydiyo lacag aad u badan inta aad wax ka iibsaneyso lazada.com.ph. Waxaan si adag u shaqeyneynaa si aan u hubinno inaadan waligaa seegin fursad aad ku hesho sicir -dhimista dheeraadka ah ee aad sugeysay, ha ahaato qaab iib ah ama dalabyo xayeysiin ah ama si fudud nambarka kuuboon -dhimista.
Ka hel 20% Off ₱ 200 Iibsasho Koodka Xayeysiinta Lazada Gaarka ah: Amarrada RedMart ee $ 15 ka Kordhay Goobta. Faahfaahin Dheeraad ah. Adeegso lambarkan xayeysiiska Lazada gaarka ah si aad u hesho qiimo -dhimis $ 15 ah amaradaada RedMart. Geli koodhka: *** 15OFF marka la bixinayo oo kharashkiisu yahay ugu yaraan $ 80 si loo soo celiyo sicir -dhimista kahor 31/07/2021. Eeg Kuuboonkan.
Ku guulayso Xidhmada Sawir -xirfadeedka With 1500 Iibsasho Faahfaahinta Foojarka Lazada 2021 Faahfaahin: Sahamin dukaamo badan oo ku yaal Lazmall si aad ugu badbaadiso amarradaada. Hel 80% dhimis ku saabsan quruxda, moodada, baahiyaha guriga, iwm. Looma baahna inaad bixiso khidmadaha maraakiibta dheeraadka ah si aad u hesho amarradaada. Dalabkan waxaa qabsan kara dadka duugga ah & kuwa cusubba.
Ka hel 10% Lazada X Gcash ku iibso lazada. DARYEELKA MACMIILKA. Amarada Xarunta Caawinta & Soo -bixinta Bixinta & Soo -Celinta Bixinta & Soo Celinta Raadso amarkayga. Raadso dalabkayga. Lambarka dalabkaaga: Wixii weydiimo kale ah, guji halkan. galid. saxiixid. Maamul Koontadayda Amarradayda Liiskayga iyo Dukaammada la Raaco ...
Ka hel 35% DHAQAN* Waxyaabaha Quruxda iyo Fashion -ka Festada Haweenka! La Soco Cod iyo Cod… Baadh boggeena kuubannada Lazada maanta oo ha ilaawin inaad fiiriso boggayaga qaybta 12.12 noocyo kala duwan oo 12.12 rasiidh ah! Tusaha Dukaameysiga Lazada ee ugu sarreeya Lazada ma bixisaa koodh dhoof oo bilaash ah? Haa. Waxaad ku soo furan kartaa foojarrada dhoofinta lacag la'aanta ah ee Lazada ganacsatada la soo xulay.
HADIYADDA U GAAR AH DADKA DADKA MUDAN! Shopapp & Adeegso Koodh si aad uga Hortagto P150! Ku saabsan Lazada. Lazada.sg waa xarunta ugu weyn ee wax laga iibsado ee Koonfur -bari Aasiya. Lazada waxay ku saleysan tahay Singapore waxayna bixisaa khibrad wax ku iibsi onlayn ah oo degdeg ah, badbaado leh oo habboon. Kaliya tayada ugu fiican iyo alaabada dhabta ah ee suuqa ayaa lagu hormariyaa lazada. Waa xal hal-joog ah oo loogu talagalay alaabooyin kala duwan oo laga soo bilaabo quruxda iyo moodada ilaa elektiroonigga iyo ...